Nhata pamakitsi | Noti Katsi
Monica sanchez | | Zvirwere, Tricks
Pazvipembenene zvese zvinogona kunetsa katsi dzedu, zviri pasina mubvunzo iyo nhata. Idzi diki mhandu dzembwa dzedu dzine mvere dzinoberekana zviri nyore uye nekukurumidza, saka kana dzikasadzorwa munguva, tinogona kuve nedambudziko, kwete pamhuka chete, asiwo kumba.
Nekuda kwekatsi yako, uye neyakowo, chimwe chezvinhu chinofanirwa kuitwa, kunyanya mumwedzi inodziya, ndizvo dova iyo kuzora pombi kana mushonga wekuuraya zvipembenene kuti uichengetedze. Uye ndezvekuti nhata mumakati dzinogona kutikonzera matambudziko mazhinji atinogona kugadzirisa nemanomano andiri kuzokupa mune ino nhungamiro. Chii chimwe, iwe unodzidza kugadzira zvisikwa zvipembenene, iyo inozobatsira zvakanyanya kana furry yako iri seganiki kumakemikari mapaipi uye mapiritsi.
1 Chii nhata?
1.2 Hupenyu hwekutenderera
2 Zvirwere zvinogona kukonzera
3 Ndingaziva sei kana katsi yangu ine nhata?
4 Nhata Kudzivirira muKatsi
4.1 Makemikari zvipembenene kurwisa nhata pane kitsi
4.1.4 Antiparasitic pfapfaidzo
4.2 Zvisikwa zvipembenene
4.2.1 Mishonga yekumba ye fleas mumakati
4.2.1.2 Mbiriso yedoro
4.2.1.3 Tea muti wakakosha mafuta
5 Zvakaitika kwandiri
Kuti urwise zvirinani chirwere ichi, zvinokurudzirwa zvikuru kuti unyatsoiziva. Nenzira iyi zvichave nyore kwatiri kuti tione poindi dzayo dzisina kusimba, uye isu tinogona kuenderera mberi nekuita marapirwo ekudzivirira pane katsi yedu panguva yakakodzera kwazvo. Ndataura izvozvo, Isu tinonyatsoziva here chinonzi nhata?
Nhata zvipembenene zvidiki (zvingangoita 3mm kureba), zvisina mapapiro, zviri zvehurongwa Siphonaptera. Ivo vanodya paropa rezvipfuwo nekuda kwechimiro chemumuromo chakagadzirirwa kupinza ropa revatenzi vavo, uye sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, dzinenge zviuru zviviri zvemhando dzinozivikanwa pasi rese. Kuwedzera kutuka kune kukuvara, mamwe acho anotapurira hosha dzinotyisa dzakadai sedenda rebubonic, typhus kana tapeworm. Ivo vakasviba muvara, semuenzaniso avo vanonetsa katsi vane mutsvuku muvara.
Makumbo ayo akareba, akagadzirira kuita kusvetuka kukuru (kusvika 34cm munzira yakatwasuka, uye 18cm munzira yakatwasuka). Izvozvi, mhuka inokwanisa kufamba kureba pakusvetuka kamwechete maererano nehukuru hwayo. Uye sezvo muviri waro wakatsimbirirwa padivi, inogona kufamba isingaonekwe kuburikidza nehuswa hwevaenzi.
Nhata zvipembenene zvine hupenyu hwakatenderera, uye inobereka kwazvo. Kubva pavanenge vari mazai kusvika pakukura, zvinogona kutora mavhiki maviri mukati memwedzi inodziya, kusvika pamwedzi misere kana kunze kuchitonhora. Vakadzi vanoisa zvisingaite mazai makumi maviri zuva rega rega mushure mekudya; muhupenyu hwake hwese anenge aisa anenge mazana matanhatu, iyo inotsemuka mazuva gumi mushure mekuisa.
Kunyange ari maruva, hazvikonzeri chero kusagadzikanasezvo ivo vasingasve ropa. Vanongodya chete hweya hwakafa neganda, tsvina huru yevanhu, uye mamwe marara. Asi mumazuva mashoma vanozoita mapundu, uye vachadzivirirwa mumakoko avo pavanosvika padanho revakuru mumazuva gumi nemana chete kana mamiriro ekunze akanaka; kana zvisina kudaro, ndiko kuti, kana iri nguva yechando uye tembiricha inoramba iri pazasi pe14ºC, vanozoishandisa semaruva kana mapundu, uye muchirimo ivo vachapedza kukura.
Zvirwere zvinogona kukonzera
Nhata hadziwanzo kukonzera zvinopfuura-zvinotyisa- kuvhiringidza vaenzi, asi zvinofanirwa kutarisirwa kuti vanogona kutapurira zvirwere, zvakaita se bubonic denda kana the typhus. Iyo katsi nhata, ine zita resainzi iri Ctenocephalides felisUye zvakare, inogona kuendesa iyo had.
Izvo zvinogona zvakare kukonzera zvinopfuura kamwe kusafara kushamwari dzedu. Zvirwere izvo nhata dzinogona kuendesa kumakati ndeizvi:
Filariasis: ndeematatu anokanganisa masukisi uye nemoyo; muchokwadi inozivikanwa nezita rekuti 'chirwere chehwormworm'. Zviratidzo ndezvi: chikosoro chisingaperi, kunetseka kufema zvakajairika, kusada kudya, uye kusagadzikana Kana ikasarapwa munguva, ichafanirwa kupindirwa.
hemoplasmosis: iwo mabhakitiriya anokanganisa iyo vascular system. Katsi dzakatapukirwa dzinozoshaya pekuremekedza, dzodzikira uremu, dzive nefivha, uye muzviitiko zvakakomba dzingave neanorexia.
Dipylidiosis: chirwere chemudumbu chinonzi tapeworm. Inogara mumatumbo ekati uye inodya izvo yaanonwa. Iko hakuna kwakakosha zviratidzo, kunze kwekurumwa nekumashure izvo zvinokumanikidza kuti ugare kumusoro uye uchikambaira pasi.
Nhata Inoruma Allergic Dermatitis (FAD): Ndicho hosha yakanyanya kutetepa pane ina, asi yakajairika. Kuita kwacho kunoitika kana nhata ichisveta ropa rekati, iro rinozotanga kumenya uye nzvimbo yakakanganiswa inopiswa, yakatsvuka neruvara. Uye zvakare, iwe uchaona kuti inonanzva sei kakawanda uye kukwenya kuyedza kubvisa iyo itch. Kana iine chirwere chemberi, tichaona kuti pane nzvimbo dzisina mvere pamuviri wemhuka.
Ndingaziva sei kana katsi yangu ine nhata?
Katsi ine nhata inozoshanduka kuita mhuka inogona kuita huta, kusagadzikana, uye kutotyisa kana infestation yafambira mberi zvakanyanya. Asi chiratidzo chekutanga icho chichatiudza icho chainacho ndechekuti vachapedza nguva vachikwenya. Unogona kuzviita nesimba guru, izvo zvinogona kukonzera ronda reapo neapo munzvimbo yakakanganiswa.
Inoshanda uye inokurumidza nzira yekuziva kana iine ndeyokupfuura muzinga nekusimudza vhudzi rayo. Ukaona anopenya madema madema kumusana kwake, kuseri kwenzeve dzake, pazasi pemuswe wake kana padumbu, ipapo hapazovi nesarudzo kunze kwekumudonhedza.
Nhata Kudzivirira muKatsi
Sezvo pasina munhu anoda kuva nenhata mumba mavo uye kuti kati yavo haifanire kuvashungurudza, zvakanakisa zvatingaite kuvadzivirira. Sei? Zvakanaka, kune nzira mbiri: mishonga y Naturalmente.
Makemikari zvipembenene kurwisa nhata pane kitsi
Muzvitoro zvezvipfuyo nemakiriniki ezvokurapa ezvipfuyo uchawana uchitengeswa antiparasitic pipettes, makorari, mapiritsi uye mapiritsi. Imwe neimwe ine zvayakanakira uye zvakare nezvayakaipira, saka tiri kuzozviona zvakadzama zvakasiyana:
Iwo ari nyore kwazvo kushandisa, chero bedzi kati isina kutya is. Mhuka inobatwa zvakanyatsonaka asi yakasimba, vhudzi rakaparadzaniswa kubva pamutsipa (kumashure), uye chigadzirwa chinoiswa. Ivo vane kushanda kwemwedzi mumwe, uye chokwadi ndecheizvozvo zvinobatsira zvikuru, kunyanya kana ukaenda kunze.
Zvisinei, chenjera chaizvo kuti usazviisa munzvimbo yaunogona kusvika, nekuti kana zvisina kudaro unogona kudhakwa.
Makola anodhura pane mapaipi, uye zvinokurudzirwa zvikuru kana tichida kuona kuti katsi yedu haisi kuzobata chero nguva yainobuda ichienda kupatio. Izvo zvinoshandawo kwemwedzi mumwe, saka kweanenge mavhiki mana tinogona kudzikama.
Dambudziko rinozoonekwa kana tikarirega richienda panze. Kazhinji nguva idzi mitsipa haina chekuchengetedza, uye kana iwe ukabatwa ... Ndingadai ndiine matambudziko mazhinji. Saka kana iwe uchirega ichienda, ita chokwadi chekutenga chishongo nerudzi urwu rwe clasp.
Mapiritsi anoshandiswa zvakanyanya se 'yekupedzisira sarudzo'. Kana kufufutirwa mukati mekitsi kwakakosha, kana kana uchiwanzove neakawanda, mapiritsi achakubatsira iwe kurarama hupenyu hune runyararo, Pasina kunetseka zvakanyanya nezve zvipembenene izvi. Maitiro ayo anogona kutora kubva pa1 kusvika pamwedzi mitatu kana mitanhatu zvichienderana nekuti unoipa upi.
Ehe, usambofa wakapa imwe kushamwari yako pasina kubvumirwa nachiremba wakosezvo inogona kukonzeresa kugadzikana uye kutyisidzira hupenyu.
Inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzekuchengetera mhuka, dzimba dzekuchengetedza mhuka uye maDziviriro ekushanda kwayo uye nemutengo wakaderera. Iyi sarudzo yakanaka kwazvo patinoda kusevha mari shoma, uye chengetedza katsi nhata mahara.
Asi ... (zvese zvine asi), chenjera kwazvo nemeso, mhino, muromo uye nzeveZvikasadaro isu taizofanira kuenda naye kuna chiremba kuti amuongorore.
Kwenguva yakati ikozvino, zviri kuwedzera zvakajairika kuwana zvipembenene zvakasikwa izvo zvisingakonzere chero dambudziko kumhuka. Neketani, mapaipi, mapfapfaidzo ... izvo zvinopihwa nenzira imwecheteyo semakemikari, asi zvakasiyana nazvo nekuva zvakasikwa, ndiko kuti, Kunyangwe katsi yako ikananzva imwe yemvura kubva pane yakasikwa pombi, hapana chaizoitika kwaari.
Ndidzo nzira dzakanakisa dzekatsi dzine huswa, uye zvakare yeavo vanogara pamba zuva rese. Zvipingamupinyi chete ndezvekuti kushanda kwayo kunogara zvishoma, saka kurapwa kunofanira kudzokororwa kazhinji (kazhinji, kamwe chete mazuva gumi nemashanu), uye kuti kana furry rikaenda kunze ivo havawanzo kubatsira. Asi iwo anodhura kwazvo, uye chokwadi ndechekuti iwo akakodzera kuyedzwa.
Zvakadaro, kana iwe usiri kuda kushandisa mari uye uchisarudza kugadzira ako chaiwo mishonga yekuuraya zvipuka kumba, pano une mishonga yemakonzo yakasiyana.
Mishonga yekumba ye fleas mumakati
Aya maparasiti haafarire hwema hwemoni zvachose. Cheka ndimu muzvidimbu uye uuye navo kumota muhari. Regai vagare husiku uye, zuva rinotevera, nejira kana chipanje, vageze kati yako.
Akapfuma mu vitamini B1, inochengeta nhata kure nekati yako. Wedzera chipunu chidiki uye wosanganisa nechikafu chako chezuva nezuva, uye unogona kutaura zvakanaka kune zvipembenene izvi zvinorwara nekusingaperi.
Tea muti wakakosha mafuta
Ndiyo imwe yemishonga inoshanda kwazvo yechisikigo kurwisa nhata mumakati, uye nyore kushandisa. Tora mafuta emuti wetii, uye uchafanirwa kumwaya kati yako kudzivirira kusangana nemeso, mhino, muromo uye nzeve.
Waizviziva here kuti chamomile tii inodzinga nhata? Kwete? Gadzirira uye, kana mvura yangodziya, nyorovesa chipanji kana jira mukati maro wopukuta pamusoro pemuviri wemhuka.
Nhata zvipembenene izvo zvandinofanira kubata nazvo gore negore. Ini handingofaniri kuchengetedza katsi dzangu chete, asiwo imbwa dzangu. Ndinoyeuka rimwe gore, muna 2010 kana zvakadaro, takava nedambudziko kumba. Icho chaive chimwe chezviitiko zvakaipisisa zvehupenyu hwangu. Taifanirwa kuwacha machira ese, machira etafura, mbatya…, kukwesha pasi nemushonga wezvipembenene mazuva ese. Zvisinei, nerombo rakanaka pakanga pasina chikonzero chekufonera iyo yekudzivirira zvipembenene sevhisi, asi mapipetti andinoisa pane katsi anga asinganyatso kushanda panguva iyoyo.
Muvhidhiyo ino iwe uchaziva nzira yekubvisa nhata dzinogona kunge dziri mumba uchishandisa mishonga yekumba:
Ini handikwanise kutaura kuti zvipuka kana makemikari zvipembenene zviri nani pakurwisa nhata pane kitsi. Zvinoenderana nezvakawanda panogara mhuka uye kuti inobvumidzwa kuenda kunze kana kwete. Mune yangu nyaya, ini handina kana imwe sarudzo kunze kwekuisa mapaipi emakemikari pavari, nekuti pavanobuda kunze, izvo zvakasikwa hazvivabatsire zvakanyanya kana vari mumunda. Asi kana furry yako ichizogara iri pamba, kuraira kwangu ndiko zviite zvakasikwaNeiyi nzira, iwe unodzivirira kutora njodzi dzisina basa.
Zvisinei nezvechigadzirwa chaunosarudza, zvakakosha kuti bvunza vet wako mazano sezvo achiziva iyo kiriniki nhoroondo yekati yako uye anokwanisa kukuudza iwe kuti ndeipi ichave yakanyanya kumukodzera.
Hapana munhu anoda kuona nhata pane kitsi, asi isu hatina imwe sarudzo asi vatakurei nepatinogona napo, kungave nemakemikari zvipembenene, kana kugadzirira kwedu mishonga kumba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Zvirwere » Nhata pamakitsi
Ndinovada zvangu vane makore angangoita maviri ekuberekwa. Ini ndaisa flea shampoo uye flea spray.Ndine imwe haazvibvumidze kuti igeze.Ndinomupa meox mix yechikafu.
Pindura kune zvinotapira
Ungaziva sei kuti kati yangu ine parvovirus
Iwe unofunga iwe unoziva zvese nezve katsi nhema? Rega zvikushamise